Lasa Fantatry Ny Daholobe Ireo Fitokonana Tsy Mihinan-kanina Nataon’i Al Khawaja, Hiadiana Amin’ny Fampijaliana Ao Amin’ilay Fonja Malaza Ratsin’i Bahrain · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2015 7:45 GMT
Mitokona any Bahrain ireo vahoaka ny 8 May, miitaky amin'ireo manampahefana mba hampitsahatra ireo fanitsakitsahana zon'olombelona atao ao amin'ny fonjan'i Jaw. Sary avy tamin'ny kaonty Twitter ofisialin'ny Fiarahamonina Nasionaly Silamo Al Wefaq @AlWefaqEN
Lasa fantatr'olona amin'ny fitokonany tsy mihinan-kanina, ilay Bahraini malaza be mpiaro ny zon'olombelona, Abdulhadi Alkhawaja, fitokonana efa nandritra ny 23 andro izao hatry ny nangatahany hanaovan'ireo manampahefana fanadihadiana momba ireo lazaina ho fisian'ny fampijaliana ao amin'ny fonjan'i Jaw, tsy mbola nisy fivoarany.
Nilaza izao i l-Khawaja tamin'ny taratasy misokatra ho an'ny Kaomisera Ambonin'ny Firenena Mikambana ho an'ny Zon'olombelona, Prince Zeid Ra’ad Al-Hussein:
Lasa fantatra ho tranoben'ny fampijaliana ny Tranobe faha-10 ao amin'ny fonjan'i Jaw, ary ny tenako mihitsy no nandre ny kiakan'ireo niharan'izany.
Nampiany fa hatramin'ny 2011 dia tena farak'izay ratsy indrindra ireo karazana fampijaliana atao amin'ireo voafonja tato anatin'ny volana vitsivitsy lasa izao, raha nanomboka nitroatra ny lazaina ho Aingam-panahy avy amin'ny lohataona Arabo. Notanisaina antsipirihany niaraka tamin'ilay taratasy ireo karazana fampijaliana sy tranganà fikarakaràna ratsy amin'ny fotoana samihafa, tafiditra amin'izany ny hery famoretana ireo fikomiana nitranga tao anatin'ny fonjan'i Jaw.
Miantso ny Kaomisera Ambonin'ny Firenena Mikambana ho an'ny Zon'olombelona i Alkhawaja, mba hihetsika haingana amin'ny toe-draharaha ao amin'ny fonjan'i Jaw
Nanomboka ny 10 Marsta ny tranga ratsy lehibe tao amin'ny fonjan'i Jaw, raha nitsidika ny fonja ny fianakavian'ny voafonja iray, ary nolazaina fa tsy afaka tsidihana ny zanany. Niresaka tamin'ny mpitandro filaminana ny anabavin'io voafonja io izay notaterina fa nidaroka azy avy eo. Naverina tany amin'ireo tranoben'ny fonja daholo ireo voafonja rehetra izay vavolombelona nahita maso ilay zavatra nitranga tao amin'ny efitra fitsidihana, ary dia nipoaka ireo fikomiana.
Tao amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Nabeel Rajab, Bahraini mpiaro ny zon'olombelona, talohan'ny nisamborana azy tamin'ny fandefasana bitsika, noborahany ny zavatra nitranga tamin'io andro io, taorian'ny famerenana ireo voafonja tany amin'ny tranobe:
Nasain'izy ireo nandeha tao an-tokotany ireo voafonja, izay nanalan'ireo mpitandro filaminana baràka azy sy nikapohany ny tsirairay tamin'izy ireo. Nifandimby nampihorohoro ireo voafonja ireo herin'ny mpitandro filaminana, nifandimby nandray ny kibay ny mpitandro filaminana Bahraini sy ireo sampana Jordaniana. Notifirina tamin'ny basy sy grenady mankarenin-tsofina, nikendrena ny vatan'ireo voafonja. Noterena hiantso ireo mpitandro filaminana hoe ‘Tompo lehibe’ ireo voafonja, voadaroka raha tratra mangataka ho any amin'ny trano fivoahana (izay nanomezana azy ireo 30 segondra mba hivoahany), voadaroka mandritra ny fisakafoanana, ary terena hiteny ratsy ireo fianakaviany raha tsy izany miatrika daroka mafimafy kokoa.
Rajab no filohan'ny ivontoerana Bahrain ho an'ny Zon'olombelona (BCHR) ary feo mpitarika ho an'ny hetsika fitroarana Bahraini. Imbetsaka nosamborina sy nofonjaina izy hatramin'ny 2011 noho ny fiampangàna maro samihafa, tafiditra amin'izany ny “fihantsiana famoriam-bahoaka ary ny fiantsoana hanao diabe tsy nahazoana alalana, tamin'ireo vohikala tambajotra sosialy”, “fandraisana anjara amin'ny fivoriana tsy nahazoana alalana”, ary “fitenenana ratsy ny andrim-panjakàna.” Manan-danja lehibe eo amin'ny media sosialy ny ankamaroan'ireo asany, ny sehatra tena iarovany ny zon'olombelona. Mifandray amin'ireo filazàny sy fiampangàna mitodika amin'ny governemanta, izay nalefany tamin'ny Twitter, ny ankamaroan'ireo fisamborana azy tato afara. Mikasika ireo bitsika momba ny fampijaliana ao amin'ny fonjan'i Jaw ao Bahrain, ary ny kirizy ao Yemen, no nisamborana azy farany ny 2 Aprily. Ny 11 May, nitarin‘ireo manampahefana hiampy roa herinandro indray ny fitazonana an'i Rajab, taorian'ny efa nanitarany azy io imbetsaka tany aloha.
Tao amin'ny taratasiny ihany koa, milaza i Al-Khawaja fa najanona tany an-tokotanin'ny fonja nandritra ny telo andro ireo voafonja, talohan'ny nanerena azy ireo hijanona tao anatin'ny tranolay plastika niisa roa. Ny iray nisy voafonja 310, ary ny iray hafa nisy 318.
Ny famborahana nataon'ireo voafonja tamin'ny @hrw dia milaza antsipirihany tranga mitovy momba ny fampijaliana sy fanararaotana tao amin'ny fonjan'i Jaw, izay itànana an'i @NABEELRAJAB. #Bahrain
#Bahrain: Fiampangàna mampiahiahy anà fanararaotana tafahoatra ao amin'ny Fonjan'i Jaw. Ilaina ny fitsaboana ara-panafody.
Nitatitra ny lafiny hafa amin'ny tantara ireo manampahefana, tamin'ny filazana fa fifehezana tranganà “herisetra sy fanapotehana” no nataon'ireo mpitandro filaminana. Namerina ny filazan'ny talen'ny fonja izy ireo, izay nanazava fa nisy fianakavian'ireo voafonja nangataka ny hamela havana hiaraka tamin'izy ireo mandritra ny fitsidihana, fa nolavina ny fangatahan'izy ireo satria tsy nitondra karatra ilay mpitsidika.
Nanamarina ny talen'ny fonja fa nosamborina ny sasany tamin'ireo mpikambana amin'ny fianakaviana izay nifandray tamin'iny resaka iny, ary “mihetsika ireo mpitandro filaminana mba hamerina ny fifehezana ” taorian'ny fangalan'ireo voafonja ankeriny ny lehilahy iray mpitsabo mpanampy.
Ao amin'ny kaonty Twitter ofisialin'ny Minisitry ny Atitany, nilaza izy ireo fa voarakitra an-tsary daholo ireo tranga niseho rehetra:
PT: voarakitra anaty lahatsary ireo tranga niseho tao amin'ny Fonjan'i Jaw
Hatreto, tsy mbola misy lahatsary azon'ny daholobe nojerena.
Ny sasany nanao hetsi-panoherana ilay hetsika “Formule 1″ natao tao amin'ny Làlana Iraisam-pirenena Bahrain ny 17 ka hatamin'ny 19 Aprily, milaza fa nanakona ny fijerena ny tena olana marina sy ireo fanitsakitsahana miseho any ambadiky ny sehatra io:
Tsia ho an'ny #F1 mihoson-drà anaraeo, eto amin'ny taninay #Bahrain, raha manao ny fifaninananareo ianareo, misy olona any ampijaliana ao amin'ny #fonja_jaw
Ny 8 May, namoaka didin'ny mpanjaka ny Mpanjakan'i Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, izay mamela heloka ireo voafonja maromaro, ho an'ny “antony amin'ny maha-olona”. Ireo mpikatroka mafana fo mpanohitra ny governemanta, sy ireo mpanao hetsi-panoherana dia mino fa hetsika iray natao io ho entina hanaronana ny tena fanitsakitsahana sy ny fitondràna mahatsiravina ireo voafonja.
Mihitsoka miaraka amin'ny voafonja miisa 4.000 ny fitondràna ao Bahrain, ho fanampin'ny fanalàna baràka eny amin'ny làlana, noho izany, nanapakevitra izy ny hamotsotra voafonja sasany mba hahazoany toerana malalaka ho an'ireo fisamborana vaovao, ary izany no namoahany io lazaina ho “didin'ny mpanjaka” io.
Araka ilay fanambaràna, tafiditra ao amin'ilay didy ireo vehivavy voafonja, ireo voafonja manana fepetra manokana amin'ny fitsaboana, ny voafonja latsaky ny 18 taona, ireo nahazo sazy latsaky ny telo taona, ary ireo voafonja nifanaraka sy nampiseho “fandraisana andraikitra sy nivoatra ara-tsosialy ary tamin'ny tetikasa fanarenana ny mpifoka rongony.”
Olona am-polony no nandefa bitsika imbetsaka ho an'i Juan Méndez, Mpitatitra Manokan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampijaliana, manantena ny mba hahazo ny fijeriny:
@antitorture_SRT_SRT @UN manery ireo #voafonjaaojaw ireo mpitandro filaminana, ny hametrahan'izy ireo ireo kirarony eo amin'ny vavany, na manasola ny lohany
@antitorture_SRT @UN Ny fanaovana zavatra tsy mety anefa tsy voasazy no mandrisika ireo mpiasa mpitandro filaminana hanao fanitsakitsahana ny zon'olombelona bebe kokoa amin'ireo #voafonjaaojaw
@antitorture_SRT @UN Tsy mamela ireo #voafonaaojaw hahazo fitsaboana ny ratrany ireo tomponandraikitra, tafiditra amin'izany ireo fery amin'ny loha sy ranjo
Nitanisa ireo tranga manjo voafonja maro ao anatin'ny taratasiny ny taratasin’‘i Al-Khawaja, ary namboraka ireo fomba fampijaliana ampiasain'ireo mpitandro filaminana sy ireo mpiambina, tafiditra amin'izany ny famerana tsy mahazo matory, fidarohana, fandavana tsy hanome fitsaboana ary famerana azy ireo tsy handeha any amin'ny trano fivoahana.
Mbola mitohy ankehitriny ireo fanararaotana sy fanitsakitsahana:
Toe-draharaha ao amin'ny #Fonjan'i Jaw ao #Bahrain…efa ho iray volana, tsy nisy nomena alalana ny hifandray amin'ny fianakaviany ny voafonja.
Mbola misy ny fampijaliana ao amin'ny fonjan'i Jaw, ary tokony manentana sy mampahafantatra ny tany tontolo ny zavatra atrehan'ireo voafonja isika. Alefaso any ivelany ny hafatra.
Niantso ny hisian'ny fanadihadiana tsy miankina momba ireo fiampangàna fampijaliana ireo ny “Human Rights Watch” (Fijerena ny Zon'olombelona). Nilaza ny Tale lefitry ny HRW any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, Joe Stork, hoe: “Mila manome alalana ireo mpitsabo tsy miankina hiditra ao amin'ny fonja ireo manampahefana, ary miantoka ny fidiran'izy ireo ao amin'ny Tranobe faha-10, izay lazaina fa nitrangan'ireo fampijaliana tena henjana.”
Ny fianakavian'ireo izay tafiditra tamin'ilay fikomiana ny 10 Martsa dia milaza fa mbola misy tsy mahazo mandray mpitsidika ireo voafonja sasany, na mandefa antso an-tariby amin'ireo havany.
Naorina ho afaka mandray voafonja miisa 448 ny fonjan'i Jaw, nefa ankehitriny izy mitazona voafonja miisa eo amin'ny 1.000 eo.
Filoha teo aloha sady mpanorina ny BCHR i Alkhawaja, ary endrika amantarana ny fitroaran'ny Bahraini. Nosamborina izy ny 9 Aprily 2011, ary manefa sazy mandrapahafaty any amin'ny fonjan'i Jaw ankehitriny. Mahatonga azy ho sotasotain'ny governemanta foana ny fandraisany anjara mavitrika amin'ny sehatry ny zon'olombelona. Ireo zanany vavy, Maryam sy Zainab Alkhawaja, dia mavitrika ihany koa amin'ny sehatry ny zon'olombelona.
Tsy fitokonana tsy hihinan-kanina voalohany nataon'i Alkhawaja ito. Ny tena marina, imbetsaka nanao fitokonana tsy hihinan-kanina izy hatry ny fanombohan'ny fitroarana hanoherana ireo hetsika sy fanararaotan'ny governemanta. Ny tena goavana dia ny fitokonana tsy nihinan-kanina nandritra ny telo volana nantsoina hoe “Fahafahana na Fahafatesana”.
Mbola manohy mitokona tsy mihinan-kanina i Alkhawaja, miandry ireo manampahefana hijery ireo fangatahany, ary avy eo handray fepetra matotra mba hampitsaharana ny fanitsakitsahana atao amin'ireo voafonja.